About us - Tianjin Wangtong Industry and Trade Lifen izithambiso mveliso
Umzi mveliso weTianjin Wangtong kunye noShishino lweLifen mveliso wezithambisoZiyakhiwa ngo-1998, zinamava angaphezulu kweminyaka engama-20 ekuveliseni izinto zokuthambisa ekhaya. Sinembali ende yeshishini le-OEM / i-ODM Umsebenzi wethu kukuvumela abathengi bethu basebenzise izinto zethu zokuthambisa.
Umzi-mveliso wethu uvelise izinto zokuthambisa ezahlukeneyo kwimarike yasekhaya, kwaye unedumela elihle kumgangatho wemveliso, besincede uninzi lwebrand lukhule ukusuka kwincinci ukuya enkulu. Umzi-mveliso wethu unokuvelisa naluphi na uhlobo lwezinto zokuthambisa ngokwemfuneko yomthengi.
Kananjalo, ukwaziswa kwethu kwefektri yezixhobo zemveliso ephezulu, ezikhethekileyo kuzo zonke iintlobo zokuvelisa izinto zokuthambisa. Sinekhulu lamawaka iklasi yokuhlanjululwa kweklasi, sinokuqinisekisa ukuba iimveliso zethu ziveliswa kwimeko yokuhlanjululwa.
Sineqela le-R & D elomeleleyo kunye neR & D ezigqibeleleyo. Itekhnoloji ephezulu ye-biochemical technology, i-nanotechnology, itekhnoloji ye-osmotic, itekhnoloji ye-crystal microemulsion technology. Ngoku sineentlobo ezingaphezu kwe-2000 zefomula evuthiweyo, iimveliso ikakhulu ezinxulumene nokukhathalelwa kobuso, ukhathalelo lomzimba.
Namhlanje, umbono wokuba mdala uyatshintsha njengoko ixesha lokuphila liqhubeka lisanda kwaye iindlela zokuphila ziguquka. Masamkele intshukumo yokuguga kwishishini lobuhle ekwamkeleni inyani kwaye kunye nayo, ubuhle bokuguga ngcono.
Iqela lethu le-R & D liphuhlise uthotho lokhuseleko oluphezulu, ukuvumela, ukufunxeka okungcono, isiphumo esibonakalayo ngakumbi seempawu zefomula, izithako kubandakanya isicatshulwa semifuno yaseTshayina, izinto zangaphandle eziluhlaza, ukuze kuqinisekiswe ukuba iimveliso zilungele ulusu olubuthathaka.
Abaqulunqi bokupakisha abagqwesileyo, isoftware yekhompyuter, izixhobo zekhompyuter, ukubonelela ngeenkonzo zokubonisana ngobuchule, iinkonzo zobungcali, igama elihle ngeenjongo zokubonelela abathengi ngeemveliso eziqinisekileyo nezonelisekileyo.
Inkqubo yolawulo olungqongqo ukuqinisekisa umgangatho wenkqubo nganye. Ngeenjineli ezininzi kunye nabahloli abasemgangathweni, ukuqaliswa kwemigca yokuvelisa yezithambiso zakwamanye amazwe ukuqinisekisa imveliso ekumgangatho ophezulu.